मदन पुरस्कारको उत्कृष्ट सूचीमा ९ पुस्तक छनौट -
मदन पुरस्कारको उत्कृष्ट सूचीमा ९ पुस्तक छनौट
कोरखबर १५ सावन, २०७८
साउन १५, काठमाडौं । मदन पुरस्कार गुठीले २०७७ को पुरस्कारका लागि ९ पुस्तक उत्कृष्ट सूचीमा छनोट गरेको छ । सूचीमा गिरी श्रीस मगरको एकलब्यको देब्रे हात, कृष्ण अविरलको करिया, कुमार नगरकोटीको कल्प ग्रन्थ, वैरवबहादुर थापाको नृत्याक्षर विज्ञान रहेका छन् ।
यसैगरी प्रभा बरालको फिलिङ्गो, लेखनाथ क्षेत्रीको फुलाङ्गे, केशव दाहालको मोक्षभूमि, जेशन कुँवरको रमिते र भगिराज इङनामको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्ताबेज संग्रह मदन पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट ९ पुस्तकको सूचीमा परेका छन् ।
मदन पुरस्कार गुठीका अनुसार २०७७ सालको पुरस्कारका लागि २२२ वटा पुस्तक प्राप्त भएका छन् । यी पुस्तकहरू मध्येबाट बढीमा १० पुस्तकहरूको श्रेष्ठ सूची तयार गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गुठीलाई ९ पुस्तकको नाम उपलब्ध गराएको हो ।
अप्रकाशित सामग्रीहरूको बाहुल्य रहेका पुस्तकलाई छनौटको एउटा आधार बनाइएको गुठीको भनाइ छ । छनौटमा परेका ९ पुस्तकहरू मध्येबाट एक पुस्तकलाई २०७७ सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिने गुठीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
छोरा आर्यनलाई भेट्न पहिलो पटक जेल पुगे शाहरुख खान !
आर्यनका कारण तनावमा शाहरुख , धमाधम छोड्दै हातको काम !
‘भ्वाइस अफ नेपाल’का विजेता किरण गजमेरलाई राष्ट्रपतिको बधाई
पुस्तक अंश : प्रधानमन्त्री ओलीलाई एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्ली लैजाँदा !
श्वेता खड्काकी बहिनी र युट्युबर उत्सव रसाइलीले मलाई कुटे : सुष्मा कार्की
शेरधनको विहे आज, २० वर्षिया जाङ्मुसंग लगनगाँठो कस्दै !
आफ्नै दाईसँग मण्डपमै विवाह, कारण थाहा पाउँदा तपाई हैरान हुनुहुन्छ !